.မန်တလေး သပိတျကငျြးမှာ တရှာလုံးသောကျနတေဲ့ အမြားသုံးရကေနျအား အဆိပျခတျတဲ့သူ (၂) ဦးကို မိပွီ. – Askstyle
.မန်တလေး သပိတျကငျြးမှာ တရှာလုံးသောကျနတေဲ့ အမြားသုံးရကေနျအား အဆိပျခတျတဲ့သူ (၂) ဦးကို မိပွီ.
မန်တလေး သပိတျကငျြးမှာ တရှာလုံးသောကျနတေဲ့ အမြားသုံးရကေနျအား အဆိပျခတျတဲ့သူ (၂) ဦးကို မိပွီ
မန်တလေး သပိတျကငျြးမွို့နယျက ဆငျမှေးကြေးရှာရှိ အမြားသုံးရကေနျအတှငျး အဆိပျခတျသူ နှဈဦးအား ဖမျးဆီးရမိပွီလို့ မွို့နယျပွနျ/ဆကျသတငျးမြားအရ သိရပါတယျ။
သပိတျကငျြးမွို့နယျ အုံးဇုံးကြေးရှာအုပျစု ဆငျမှေးကြေးရှာရှိ အမြားသုံးရကေနျအတှငျးမှ ရကေို သောကျသုံးမိပွီး အမြိုးသမီးတဈဦး သဆေုံးမှု ဖွဈစဉျတှငျ အဆိပျခတျသူ နှဈဦးကို ဖမျးဆီးရမိခွငျးဖွဈတယျလို့ သပိတျကငျြးမွို့ မွို့မ ရဲစခနျးကဆိုပါတယျ။
သပိတျကငျြးမွို့နယျ အုံးဇုံးကြေးရှာ အုပျစု ဆငျမှေးကြေးရှာတှငျ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ ဒီဇငျဘာ ၂၁ ရကျက အမြားသုံးရကေနျ အတှငျးမှ ရကေိုသောကျသုံးမိ၍ အမြိုးသမီးတဈဦး သဆေုံးခဲ့သညျ့ဖွဈစဉျ ကွောငျ့ သပိတျကငျြးမွို့ မွို့မရဲစခနျးက သမှေုသခေငျးအမှတျစဉျ ၄၁/၂၀၂၀ ဖွငျ့ ရေးဖှငျ့စုံစမျးစဈဆေးခဲ့ပွီး ရကေနျအတှငျးမှ ရကေို ဓာတုဗဒေဝနျရုံးတှငျ ပေးပို့စဈဆေး ခဲ့ရာ ဆိုငျရာနိုကျ စမျးသပျတှရှေိ့ရ၍ လူတဈဦး တဈယောကျအား အသကျ သေ စရေနျ အကွံဖွငျ့ အဆိပျခတျသူကို အရေးယူ ပေးရနျ သပိတျကငျြးမွို့ မွို့မရဲစခနျး၌ (ပ)၁၃/၂၀၂၁၊ ရာဇ သတျကွီးပုဒျမ ၃၀၂/၃၂၈ ဖွငျ့ ပွောငျးလဲဖှငျ့လှဈခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။
အဆိုပါအမှု အား ပွငျဦးလှငျခရိုငျ ရဲတပျဖှဲ့မှူး ဒုတိယ ရဲမှူးကွီးခငျဇျောမွငျ့၏ ကွီးကွပျကှပျကဲ မှုဖွငျ့ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး ရဲတပျဖှဲ့ မှူးရုံးမှ ရဲမှူးအောငျကြျောဦးနှငျ့အဖှဲ့၊ သပိတျကငျြးမွို့နယျ မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူးထှဋျဦးရှိနျ၊ မွို့မရဲစခနျးမှူး ဒုရဲမှူး တငျမိုးဇျောတို့ ပါဝငျသော ပူးပေါငျးအဖှဲ့က စုံစမျးဖျောထုတျခဲ့ရာ ရကေနျအတှငျး အဆိပျခသြူ မငျးခနျ့မောငျနှငျ့ ၎င်းငျးအား စခေိုငျးသူဝငျးနိုငျတို့ကို စုံစမျးဖျောထုတျ ဖမျးဆီးရမိပွီး ဆကျလကျစဈဆေးရာ ပွဈမှုကြူးလှနျသူ မငျးခနျ့မောငျက မိမိ သဘောဆန်ဒအလြောကျ ဇနျနဝါရီ ၂၅ ရကျ တှငျ သပိတျကငျြးမွို့ မွို့နယျတရားရုံး၌ ဖွောငျ့ခကျြပေးခဲ့ခွငျးဖွဈတယျလို့ဆိုပါတယျ။
အဆိုပါအမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ သပိတျကငျြးမွို့ မွို့မရဲစခနျးမှ အမှုအား အမွနျ တရားစှဲတငျနိုငျရေးအတှကျ ဆကျလကျ ဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး သိရ ပါတယျ။
မန္တလေး သပိတ်ကျင်းမှာ တရွာလုံးသောက်နေတဲ့ အများသုံးရေကန်အား အဆိပ်ခတ်တဲ့သူ (၂) ဦးကို မိပြီ
မန္တလေး သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်က ဆင်မွှေးကျေးရွာရှိ အများသုံးရေကန်အတွင်း အဆိပ်ခတ်သူ နှစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိပြီလို့ မြို့နယ်ပြန်/ဆက်သတင်းများအရ သိရပါတယ်။
သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် အုံးဇုံးကျေးရွာအုပ်စု ဆင်မွှေးကျေးရွာရှိ အများသုံးရေကန်အတွင်းမှ ရေကို သောက်သုံးမိပြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးမှု ဖြစ်စဉ်တွင် အဆိပ်ခတ်သူ နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သပိတ်ကျင်းမြို့ မြို့မ ရဲစခန်းကဆိုပါတယ်။
သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် အုံးဇုံးကျေးရွာ အုပ်စု ဆင်မွှေးကျေးရွာတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်က အများသုံးရေကန် အတွင်းမှ ရေကိုသောက်သုံးမိ၍ အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ် ကြောင့် သပိတ်ကျင်းမြို့ မြို့မရဲစခန်းက သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် ၄၁/၂၀၂၀ ဖြင့် ရေးဖွင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ရေကန်အတွင်းမှ ရေကို ဓာတုဗေဒဝန်ရုံးတွင် ပေးပို့စစ်ဆေး ခဲ့ရာ ဆိုင်ရာနိုက် စမ်းသပ်တွေ့ရှိရ၍ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်အား အသက် သေ စေရန် အကြံဖြင့် အဆိပ်ခတ်သူကို အရေးယူ ပေးရန် သပိတ်ကျင်းမြို့ မြို့မရဲစခန်း၌ (ပ)၁၃/၂၀၂၁၊ ရာဇ သတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂/၃၂၈ ဖြင့် ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအမှု အား ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယ ရဲမှူးကြီးခင်ဇော်မြင့်၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ မှုဖြင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးရုံးမှ ရဲမှူးအောင်ကျော်ဦးနှင့်အဖွဲ့၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးထွဋ်ဦးရှိန်၊ မြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူး တင်မိုးဇော်တို့ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့က စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ ရေကန်အတွင်း အဆိပ်ချသူ မင်းခန့်မောင်နှင့် ၎င်းအား စေခိုင်းသူဝင်းနိုင်တို့ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးရမိပြီး ဆက်လက်စစ်ဆေးရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ မင်းခန့်မောင်က မိမိ သဘောဆန္ဒအလျောက် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက် တွင် သပိတ်ကျင်းမြို့ မြို့နယ်တရားရုံး၌ ဖြောင့်ချက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဆိုပါအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သပိတ်ကျင်းမြို့ မြို့မရဲစခန်းမှ အမှုအား အမြန် တရားစွဲတင်နိုင်ရေးအတွက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရ ပါတယ်။